Guddiga Farsamada Shirka Gobollada Dhexe oo sheegay in Ergooyinka badi ay qanciyeen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Farsamada Maamul u sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud Max’ed Xaashi oo u warramayay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in heer gaba gabo ah ay u mareyso qancinta Ergooyinka wax tabanaya si loo sii amba qaado howlaha kale ee shirka.
“ marka laga reebo wax yar inta badan Ergooyinka waan qancinay ,inta dhimanna waxaam rajeynaa in maanta aan qancinno” ayuu yiri Max’ed Xaashi.
Maalin ka hor ayaa buuq iyo sawaxan hareeyay dartiis shirka Cadaado waxaa uu galiyay hakad walow ay dadaallo xoog leh weli wadaan Guddiga Farsamada Shirkaas.
Ergooyinka ayaa muran ka qaba Dastuurka Maamulkaas Gobollada dhexe oo weli aan natiijo laga gaarin ka doodistiisa.